Science Fitsipika simika
Fantaro hoe inona no vahaolana
Ny vahaolana dia voafaritra ho ny habetsaky ny singa iray mety ho levona amin'ny hafa. Io no farafaharatsiny ny solute izay mety ho levona ao anaty solvent amin'ny equilibrium, izay mamokatra vahaolana mahatsiravina. Rehefa misy ny fepetra sasany, dia mety hipoitra tampoka lavitra ny toeran'ny solitany, izay mamokatra vahaolana ambony tafo. Ankoatra ny fihosena na ny supersaturation, ny fampitomboan'ny solute dia tsy mampitombo ny fifantohana amin'ny vahaolana.
Fa kosa, ny solitany tafahoatra dia manomboka mamoaka vahaolana.
Ny fizotran'ny famotehana dia antsoina hoe fanapotehana . Ny halemem-panahy dia tsy ny fananan-javatra mitovy amin'ny tahan'ny vahaolana, izay manoritsoritra ny fahasamihafan'ny solute ao anaty solvent. Na ny tsy fahaiza-manavakavaka toy ny fahafahan'ny harona hamongorana ny iray noho ny vokatry ny fihetsiky ny simika. Ohatra, ny metaly zinc dia "mamafa" amin'ny asidra salohydra amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitry ny fandeferana izay miteraka ny ion-zana amin'ny vahaolana sy ny famoahana gazy rano. Zana-piozona tsy misy solika. Ny fanehoan-kevitra dia tsy resaka mikasika ny tsy fisian'ny zinc.
Amin'ny tranga mahazatra, ny solute dia mafy (ohatra, siramamy, sira) ary solventente dia ranon-javatra (ohatra, rano, chloroform), fa ny solute na solventvent dia mety ho gas, flüss, na solid. Ny solvent dia mety ho zavatra madio na fifangaroana .
Ny fepetra tsy misy fotony dia midika fa ny solute dia tsy mety levona amin'ny solvent.
Amin'ny tranga vitsivitsy dia marina fa tsy misy manelingelina. Amin'ny ankapobeny dia mbola mamotika kely fotsiny ny soloky tsy misy fotony. Na dia tsy misy fetran-tsofina mafy sy haingana aza izay mamaritra ny voka-dratsiny ho tsy mety, dia mahazatra ny mampihatra ny tokonam-bidy izay tsy misy fotony dia latsaky ny 0,1 gram manimba ho 100 milliliter solvents.
Misokatra sy mora vidy
Raha ny vatana dia tsy mety levona amin'ny ampahany rehetra amin'ny solventsy manokana, dia antsoina hoe mismisy ao aminy izany na manana ny tany antsoina hoe miscibility . Ohatra, ny ethanol sy ny rano dia mifangaro tanteraka. Etsy an-daniny kosa, ny menaka sy ny rano dia tsy mifangaro na mamirapiratra eo amin'ny andaniny. Ny solika sy ny rano dia heverina ho tsy azo ovaina .
Fahamendrehana amin'ny asa
Ny famotsorana ny solute dia miankina amin'ny karazana fatorana simika amin'ny solute sy solvent. Ohatra, rehefa mamitsaka ao anaty rano ny ethanôl, dia mitazona ny maha-molekiola azy amin'ny ethanôl izy, fa ny fifandraisana amin'ny hydrogen vaovao dia misy eo amin'ny ethanol sy ny molekiolan'ny rano. Noho izany antony izany, ny fampihenana ny ethanol sy ny rano dia mamokatra vahaolana amin'ny vola kely kokoa noho izay azonao atao mba hanangonana ireo volkano ethanol sy rano.
Rehefa mitambatra ao anaty rano ny chloride (NaCl) na ny fanafody ionika hafa, dia mivadika any amin'ny ion. Ny liona dia lasa lavaka na voahodidin'ny molekiolan'ny rano.
Ny halemem-panahy dia miteraka fifandanjan-kery mahavariana, miteraka fanodikodinam-panoherana sy fanapotehana. Ny fitomboana dia tratra rehefa mitranga matetika ireo dingana ireo.
Units of Solubility
Ny charités et les tablels dia manitatra ny tsy fahampian'ny fitaovana samihafa, solvents, temperature, ary toe-javatra hafa.
Ny IUPAC dia mamaritra ny fieken-keloka amin'ny lafiny iray amin'ny solute mankany solvent. Ny firaiketam-pandraiketana azo ampiasaina dia ahitana ny molarity, ny molaly, ny habetsaky ny volombava, ny volavolan-tapitrisa, ny ampongabendanitra, sy ny sisa.
Ny halemem-panahy dia mety ho voatarika amin'ny fisehoan'ny karazam-bary hafa amin'ny vahaolana, ny fizotran'ny solute sy solvent, ny mari-pana, ny tsindry, ny halavan'ny ampahany ary ny polararetina.
Inona no fanapahan-kevitra, ary ahoana no fiasany?
Famaritana sy ohatra hozatra
Famaritana sy Ohatra ho an'ny Hypothesis
Famaritana ny atao hoe elementary reaction
Periodical Table Definition
Ny isotope famaritana sy ohatra amin'ny Chemistry
Famaritana ny atao hoe Nucleus in Chemistry
10 Fakan-kevitra momba ny fotodrafitrasa fototra
Famaritana sy ohatra ho an'ny emulsion
Famaritana ny votoatin'ny famaritana
Vipers: The Snoring Notorious, Venomous, Long-Fanged
Nahoana ny Kristianina no mivavaka amin'ny alahady?
Ny Demographics an'ny Shina Tanibe
Skilist Gear Checklist
Fomba entina miady amin'ny Aretes
Ny lamba voafantina - Ny tantaran'ny lamba sy ny fasika samihafa
Fananganana Database Access amin'ny Office 365
Ny teny 100 ampiasaina indrindra amin'ny teny anglisy
¿Qué es la dureza extrema para el nuevo perdón y cómo se prueba?
Fanandramana mora simika izay azonao atao ao an-trano
Boky tsy ankanavaka tsara indrindra ho an'ny ankizy
Ahoana ny famakafakanao ny kapila elektrika?
Fanontaniana momba ny fanaraha-maso elektronika
Ny fetin'ny Atheists
Karazan-rock ho an'ny fianjera: Granite, Sandstone & Limestone
Famaritana, teny filazana, ary ny maha-zava-dehibe an'i Seiyu
Allosaurus vs. Stegosaurus - Iza no nandresy?
Ady An-trano Amerikanina: Battle of Oak Grove
Ny Ortodoksa ortodoksa atsinanana
Ny niandohan'ny Japoney Comic
Miverena sy mivoaha amin'ny fiaramanidin'ny zato
Fampidirana amin'ny garage